Drama, Essays.. » အူးဆာမေးတဲ့ ငယ်ဘ၀	41
အဲနောက်တစ်ခုက မိဗုံတို့အဖိုးနဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ သူက ရှေးလူကြီးမို့လားတော့မသိဘူး မတရား လျှာရှည်တာရယ်.. ရေနွေးကလည်း တအားသောက်တာ.. အိမ်လာရင်ရေနွေးအိုးချပေးရတာ တလုပ်.. မိဗုံငယ်ငယ်တုန်းက သူ့ဆိုမတည့်ဘူး.. ခြေနင်းသံကြမ်းရင် ကြမ်းပြန်ပြီ… စကားကျယ်ပြောရင် ပြောပြန်ပြီ ဖိနပ်ချွတ်ရင် ညီအောင်မချွတ်လို့… စသဖြင့် စသဖြင့် စုံလို့… အဲ့ဒါမျိုးတွေ မမြင်ချင်ရင် အိမ်မလာနဲ့ပေါ့လို့ ကိုယ်ကပြန်ပြန်ပြောရင် အမေတို့က ဆွဲဆွဲဆိတ်လို့ ပါးစပ်က ပြန်မပြောရဲဘူး.. စိတ်ထဲကတော့ ညှိုးထားတယ်… အဲ့ဒီနေ့ကလည်း လာပါရော.. တောင်ဝှေးကြီးထောက်လို့ .. မိဗုံက လှေကားကို ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးလုပ်ပြီး တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဆော့နေတာ.. ဆော့ရမလားဆိုပြီး တောင်းဝှေးနဲ့ ခေါက်သွားတယ်.. စိတ်ကတိုပြီ… အဘိုးက မိဗုံရေ ရေနွေးချပေးလိုက်ပါအုံးဆိုတာနဲ့.. သူသောက်မယ့်အိုးထဲကို လက်ဖက်ခြောက်ကနည်းနည်းလေးဘဲထည့်ပြီး ကွမ်းယာထဲထည့်စားတဲ့ ဆေးရွက်ကြီးခြောက်တွေ ထည့်ပေးလိုက်တာ…. အဲ့နေ့က ချွေးစေးတွေပြန်ပြီး အိမ်မှာတင် ဆရာပင့်ပြီး ဆေးထိုးလိုက်ရတယ်…. (တောင်းပန်ပါတယ် အဘိုးရယ်.. ကလေးတုန်းက မသိလို့.. ပြီးတော့လေ ရွာမှာက အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေလာရင်.. အိမ်ကကြက်ချက်ကျွေးကြရတာ.. ဈေးတွေဘာတွေလည်း မရှိတော့… အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေလာပါလေရော… ကြက်တွေလည်းမျက်ခုံးလှုပ်ပြီပေါ့… မိဗုံကို ဦးလေးက ပေးထားတဲ့ ကြက်မလေးရှိတယ်…. ကိုယ်က သိပ်သံယောဇဉ်ကြီးတော့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ပေါ့… သူကကြက်ကလေးတွေပေါက်တော့ ရှစ်ကောင်… ကြက်ကလေးတွေ နည်းနည်း ကြီးလာတော့ ..ကြက်နာကျတာနဲ့ တိုးတယ်… ပါးစပ်ထဲက အရည်တွေထွက်ပြီး မှိန်းနေကြတယ်… အဲ့ဒါကိုမိဗုံက ကြက်ကလေးတွေ နှာစေးနေတယ်လို့ထင်တာ.. ကိုယ်တွေနှာစေးရင် အမေက ဘာမီတွန်တိုက်နေကြဆိုတော့.. ဘာမီတွန်တွေကြိတ် မောင်လေးကို ပါးစပ်ဖြဲခိုင်း ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ စုပ်ထည့်ပြီး ကြက်ကိုဘာမီတွန်တိုက်ကြတာ..ပြီးတော့ ပုဆိုးစုတ်တွေနဲ့ အုပ်ပေး..အအေးမမိအောင်လို့…. နေ့လည်လည်းမလှုပ် …ညနေလည်း ထမလာ.. . မနှိုးသောအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားကြလေသတည်းပေါ့…. (အော် ကလေးဆိုတော့ မသိလို့ပါ..စေတနာတွေဗလဗွနဲ့ ပါ) အဲ့ဒါနဲ့ အူးလေးက အစားပြန်ပေးထားတာ ကြက်မလေး .. ခြေထောက်က အမည်းလေးနဲ့ .. ဧည့်သည်တွေလာတော့ ချက်ကျွေးရအောင်ဆိုပြီး ကြက်အုပ်စုကို လိုက်ပစ်ရော…ပစ်တာက တခြားကြက် မှန်တာက မိဗုံကြက်… အကျိုးပေးပုံများ… အဲ့ဒါအူးလေးက မိဗုံသိရင်.. ဆူညံနေလိမ့်မယ်.. ဧည့်သည်တွေနဲ့ဆိုပြီး ဘယ်သူ့မှ မပြောဖို့ပြောထားတယ်… ဒီလိုနဲ့စားချိန်ရောက်.. မိဗုံကလည်း ခြေထောက်နှစ်ချောင်းဆင်း ဇလုံကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီး စားနေပြီကြက်သားနဲ့… အဲ့ဒါကို အပေါင်းအသင်းကလည်း ကောင်းတော့ စားနေတုန်းလာပြောတာ… နင့်ကြက်လေး ဟဲ့ အဲ့ဒါက .. မဟုတ်ဘဲနဲ့ မပြောနဲ့လို့ ဆိုတော့… မန်ကျည်းပင်အောက်မှာ အမွေးတွေတောင်ရှိသေး ငါလိုက်ပြမယ်..ဆိုပြီး သွားကြည့်တော့ အဟုတ်.. ဒါနဲ့စားနေတဲ့ ထမင်းတွေကို အိမ်ရှေ့တင်လင်းထဲ ကို ပက်ပြီး ကြက်တွေကိုခေါ်တာ…. သေချာအောင်လို့ ဟုတ်သား.. ကိုယ့်ကြက်က ပါမလာဘူး… ထမင်းဇလုံကို ပစ်ချပြီး ဧည့်သည်တွေကျွေးနေတဲ့နေရာသွားပြီး ငါ့ကြက်ကို ပြန်ဆက်ပေး… ပြန်ဆက်ပေးဆိုပြီး ဟင်းပုဂံထဲ ရောက်နေတဲ့ ကြက်ကို အကောင်ဖြစ်အောင် ပြန်ဆက်ခိုင်းတာ… စားပွဲခုံကို ခြေကန်ဆွဲပြီး အတင်းအော်ငိုပြီး ကြက်ကို အကောင်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ခိုင်းတာ.. ဧည့်သည်တွေလည်း ထမင်းစားပျက်… အမေတို့လည်း စိတ်တွေညစ်ပြီး တစ်အိမ်လုံးဆူညံနေလို့… အူးလေးက တခြားအိမ်က ကြက်နီမကို မရမက ဖမ်းပြီး ဆောင်းနဲ့အုပ် ပြီးမှ မိဗုံကိုခေါ်ပြပြီး ဟိုမှာ ကြက်ဆက်ပြီးသွားပြီး မဆူနဲ့တော့ဆိုပြီး ချော့တာ.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကြက်က ခြေထောက်အ၀ါရောင်..မိဗုံကြက်ကခြေထောက်အမည်း… ငါ့ကြက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ငိုပြန်ရော.. အူးလေးဖြစ်သူက ခုနက ဆနွင်းမှုန့်နဲ့ချက်လို့ ခြေထောက်က ၀ါသွားတာ ဆိုမှ.. အငိုတိတ်ပြီး ထမင်းဇလုံပြန်ကောက်ပြီး.. ပြန်စားတာ…. ခုန ကြက်သားဟင်းနဲ့…. ( မပြောဘူးလား… ကလေးပါဆို..ဘာသိလိမ့်မတုန်းနော့ ) … About ဗုံဗုံ
ခင်ဇော် says: ပဂိုးဒါး
ဗုံဗုံ says: ဟင့်အင်း… ဟင့်အင်း…
လိုက်မှာဘဲ….လိုက်မှာဘဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3137
surmi says: အောင်မလေးးးးး
ဒါကြောင့်လူဇိုးဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်နေတာ မီးရှို့တဲ့ အခန်းတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျို့
၁၄ – ၁၆ အရွယ်တွေက ကြောင်းတွေလည်း ချန်မထားပါနဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အဲလေ… ၁၄ ..၁၆ .၂၀…. ထိ ဆော့တုန်းဗျ ယောက်ခမ….
အော်…. ရေးစရာတွေ ထပ်ရလာတယ်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: ကယားသဗုံမ
ဗုံဗုံ says: ကြောင်နဲ့ ဆော့တာတွေ ရေးလိုက်မှာနော်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: နာ အရှုံး​ပေးတယ်​ဗုံ.
တစ်​ခု​တော့ ​မေးအူးမယ်​.. ကိုယ့်​ရည်းစား​ရှေ့မှာ လုံချည်​စလွယ်​သိုင်းပြီး​ဆော့ဖူးလား :D
ဗုံဗုံ says: ဟင့်အင်း မွန်…စလွယ်သိုင်းပြီး မဆော့ဖူးဘူး .. အုပ်ဘဲ အုပ်မိဖူးတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တလင်း ကို ဘာလို့ တင်လင်းးလို့ ခေါ်တာလဲငင်
ဗုံဗုံ says: ဟဲ့ အမှားရှိလို့ခဲတံနောက်မှာ ခဲဖျက်တပ်ပေးထားတာမို့လား….
ကျစိမ့်မသောက်ရတာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ကိုယ်တွေလည်းငယ်တုန်းကဆော့တာပါပဲ
ဗုံဗုံ says: ဟိုင်း အန်ကယ်ဂျီး…..
၀ူခုံးကားထဲကလို သိုင်းချတမ်းဆော့ရအောင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ငယ်ဘဝတောင် ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းရင်
ဗုံဗုံ says: ကြီးဘ၀ကတော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိပေါ့ အူးနိုရာ….
ဘာမှကို ပြောမကောင်းဘူး…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2373
aye.kk says: ရေးပြတတ်ပါ့ဗုံဗုံရယ် ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ။
ဗုံဗုံ says: ထန်းတောသွားပြီး ထန်းရေပြိုင်သောက်တမ်းပြိုင်ကြသေးတာ
ကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာဘဲ…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: သဗုံက ငယ်ကထဲက သဗုံဂိုးးးး
ဒါနဲ့ ကြက်ချက်စားရင်စား လယ်နဲ့ နွားတော့ ဂျီးဒေါ်ဖို့ချန်ထားနော် တူမလေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အူးလေးက လေဖြတ်ထားတော့
လုပ်ရမှာ……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အူးလေးကို တူမလေးလက်အပ်ခဲ့ပီး လယ်နဲ့နွားရောင်း ဂျီးဒေါ်က မြို့မာ ဆေးဆရာသွားရှာမလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: ဆေးဆြာမရှာဘဲ …. စပွန်ဆာပေးနေရင် ဒွတ်ခ
ရှိတာလေး ကုန်ရချိရဲ့… Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ငယ်ဘွအကြောင်းပြန်ပြောရတာ ပျော်စရာတယ်ကောင်း…
.ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ကလည်း ဧည့်သည်မျှော်ရတာအမော..ဟင်းကောင်းစားရလို့ .နယ်မှာနေခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေတိုင်း ဗုံဗုံတို့လိုပဲ မီးတောက်အောင်ဆော့ခဲ့ကြရတာချည်းပဲ..ကံကောင်းပ
.နောက်ဆက်မဲ့ဇတ်ကြမ်းလေးတွေစောင့်ဖတ်ပါအုံးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အံမယ်.. နောက်ဇာတ်မယ့်ဇာတ်လမ်းက
အာ့ဂျောင့် ငှက်ကထကြီး ဖြစ်တာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ရွှေဘ နောက်ပိုင်းကြမ်းမည်ဆိုတာမိုးပေါ့ ..ငိငိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: သြော် မိဗုံ ရဲ့ ငယ်ဘ၀အကြောင်းကိုး၊ ဖတ်ပြီး ဟို သီချင်းသွားသတိရတယ်
ဗုံဗုံ says: ဆယ်ကျော်သက်တောင်မဟုတ်..နှစ်ဆယ်ကျော်သက်တောင်
ဆော့တာဘဲမို့လား…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: သူတို့ရွာမှာ ဧည့်သည်လာရင်
ဗုံဗုံ says: နင့်တော့ ကြက်သားမကျွေးဘူး…
Crystalline says: သဗုံက ငယ်​ဘွထဲက သဗုံကိုး.. အစမသတ်​ရ​သေးတဲ့ဇာတ်​​လေးလည်းဆက်​ပါအုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အဟင့် လာလာစပြန်ပြီ ….. ငိုချင်နေပါတယ်ဆိုမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ကန္နားစီး မိဂီ says: ဟိ
ဗုံဗုံ says: ဂီ… အိမ်ကလှည်းနဲ့ နွားလေး
ဂီ့ကို စပွန်ဆာ ပေးဗျဇီ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ရီလိုက်ရတာ ဗုံတလုံးရယ်။အသက်ရှည်ဆေးလေး ခဏခဏလာတိုက်ပါနော်။
ဗုံဗုံ says: တီဒုံ ရေနွေးသောက်မလားဟင်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ခု ရန်ကုန်က ကလေးတွေ ဒီစာများ ဖတ်မိရင် သဗုံကို အားကျသွားမယ်….
ဦးကြောင်ကြီး says: အဲဒါ၈တော့ ကင်းကောင်ပြာ တာဝံယေ.. ဦးကြောင်က ပိုက်ဆံလျှာဒါပဲ တတ်တယ်..။ ခလေးတွေက ကင်းကောင်တာဝမ်..။
Kaung Kin Pyar says: . ဒီလို ကလေးထိန်း တာဝန်ဂနေ ရှောင်ထွက်သွားလို့ ရမား အူးကြောင်…
ဗုံဗုံ says: ရန်​မဖြစ်​ကြနဲ့ တိတ်​ကြ တိတ်​ကြ ခိခိ
တောင်ပေါ်သား says: ဒီရွှေဘိုသဗုံကို ချွေးမတော်ရလို့ကတော့
ယောက္ခမ မသောက်ပဲ မူးလောက်တယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အရက်​ဖြတ်​​ဆေး​လေ ​ယောက်​ခမွ…. ပိုက်​ဆံကုန်​သက်​သာတာ​ပေါ့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
ဗုံဗုံ says: အရီးလာရင်​ ​ရေ​နွေးတိုက်​မယ်​ ကြက်​သားဟင်းနဲ့ ​ကျွေးမယ်​​​လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.